Awood Sheegashada Kheyre Iyo Shaqo Ka Joojintii Qadro!!!!!!! – Hornafrik Media Network
Waxey aheyd 14-kii November 30 maalin kaddib qaraxii Zoobe, waxaa hoolka Sahal ka socday xaflad u muuqatay mid loogu baroor diiqayo dadkii ku baaba’ay qaraxaas, looguna duceynayo inuu alle caafimad siiyo kuwii ku dhaawacmay.
Waxey aheyd habeen murug iyo mashaqadeeda xambaarsan, waxaa goobta soo gaaray ra’aysul wasaare Kheyre, sidoo kale waxaa hoolka dhinaca kale kaga sugnaa wiil yar oo caseeye (baalashle) ah, oo ku dhaawacmay qarixii Zoobe
Wiilkii yaraa oo ku haminayay in uu la kulmo ra’aysul wasaare Kheyre ayaa ka codsaday Khadra Ali bashi oo ka mid aheyd shaqaalaha Maamuus Company oo ka shaqeeya diyaarinta hoolalka xafaladaha, in ay ka caawiso inuu la kulmo ra’aysul wasaaraha.
Waxaa soo idlaatay qudbaddii ra’aysul wasaaraha, Qadro oo is celin weysay, eegeysayna codsiga wiilka yar ee dhibanaha ah ayaa ka daftay miis agteeda yaalay codbaahiye (Microfone), waxeyna cod dheer kaga codsatay ray’aysul wasaaraha in uu jiro wiil yar oo ku dhaawacmay qarixii Zoobe rabana inuu la kulmo.
Ra’iisul wasaare kheyre ayaa aqbalay codsigii, waxuu kusoo laabtay masrixii uu kasii dagaayay, waxaa hoolkii is qabsaday sacab iyo farxad, Waxaa soo gaartay Qadro oo gacanta ku dhagan wiilkii yaraa sida idinkaga muuqata sawirka kore.
Ra’iisul wasaaraha ayaa wiilkii yaraa u shegay in uu ka xunyahay dhibka kasoo garay qarixii Zoobe, waxuu u yeeray Cumar oo ah Chief Protocole-kiisa waxuuna ku amray in uu wiilka yar siiyo kaar uu ku qoranyahay lambarada laga helo isaga ( Business Card), waxuuna wiilka yar ku yiri Kheyre “Adeer lambarkaas igaso wac, aniga ayaa wax kuu qabanayo, waxaa tahay mustaqbalka dalka, waxna kaama hallaabayaan insha allah”.